किन भयो उरुम्कीमा साम्प्रदायीक दंगा | BIVAS
← गोर्खालीको हत्यारालाइ अदालत पठाईने
माओवादीलाई सरकारमा ल्याउनु जरुरी देख्दैछ भारत →
किन भयो उरुम्कीमा साम्प्रदायीक दंगा
– पुष्पराज आचार्य
जनवादी गणतन्त्र चीनको उत्तरपश्चिमी प्रान्त सिञ्झियान स्वशासित क्षेत्र हुनुका साथै यसमा उइघुर मुसलमानहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति छ। हान समुदायको बाहुल्यता रहेको चीनमा उइघुर मुसलमानहरूले लामो समयदेखि पृथक राज्यको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यसका लागि हालसम्म थुप्रै हिंसात्मक आन्दोलन समेत गरेका छन्। यससंगै उइघुर मुसलमानहरूले गरेको पृथक राज्यको मागलाइ उरालेर अमेरिकी संरक्षणमा चीन टुक्र्याउन उइघुर समुदाय प्रयोग गर्ने खतरनाक योजना रहेको छ।
उइघुर आन्दोलन अमेरिकाबाट सञ्चालित छ। विश्व उइघुर कंग्रेसको मुख्यालय अमेरिकामा छ र त्यस आन्दोलनका नेता रेविया कादिर अमेरिकामा बसोबास गर्छिन्। जसरी तिब्बतको पृथकतावादी अभियानका लागी दलाई लामाले भारतबाट गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यसैगरी कादिरले अमेरिकाबाट सञ्चालन गरेकी छिन्। एक जना उइघुरको हत्या हुंदा अमेरिकाले वक्तव्य जारी गर्छ वा राष्ट्रपतिले चीनलाई मानवअधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्छन्।
जुलाई ५ तारिख आइतबार सांझ ७ बजे, सिञ्झियानको राजधानी उरुम्कीमा एकाएक लाठी, चक्कु तथा अन्य हतियार बोकेका सय भन्दा बढी मानिसहरूको समूह सडकमा देखियो । उनीहरूले हान समुदायका मानिसहरू खोज्दै थिए र बदलापूर्ण भावमा चिच्याउंदै थिए। अघिल्लो महिना दक्षिणी प्रान्त ग्वाङडोङको साओगानस्थित एक फ्याक्ट्रीमा उइघुर र हान समुदायका मजदुरहरूबीच भएको झगडामा दुई जना उइघुर मुसलमानको मृत्यु भएपछि त्यसको प्रतिशोधस्वरुप उरुम्कीमा दंगा भड्काउन एउटा समूहले यो कसरत गरेको थियो। यो समूह सडकमा त्यसै आएको होइन। विश्व उइघुर कंग्रेसले अमेरिकाबाट विश्वभरका उइघुर समुदायलाई चीनको दक्षिणमा मारिएका आफ्ना दुईजना कार्यकर्ताको मृत्युको विरोधमा आन्दोलित हुन आह्वान गरेपछि त्यो समूह सडकमा घरेलु हतियारसहित निस्किएको थियो ।
जुलाई ५ आइतबारको राति ८ बजे यसरी निस्किएको सय जनाको समूह बढेर दुई हजार पुग्यो। दंगाकारीहरूले हान समुदायका थुप्रै घर, पसल, सवारी साधनमा आगजनी गरे। रातको समयमा भएको यस दंगामा गोली चलेका थुप्रै आवाजहरू सुनिए। यो सामाग्री तयार पार्दासम्म दंगामा १८४ भन्दा बढीको ज्यान गईसकेको छ। उरुम्कीका सडक रगतले भिजेका थिए भने त्यहांका अस्पतालहरूमा घाइतेहरूको भीड लागिसकेको थियो। घटनामा ९ सयको हाराहारीमा घाइते भए।
यति धेरै मानिसको हत्या कसले गर्‍यो ? यही प्रश्न यतिबेला गम्भीर रूपमा उठेको छ। चीनको इतिहासमा उरुम्कीमा भएको यो नरसंहार सन् १९८९ मा तियानमेन स्क्वायरमा भएको नरसंहारपछिको सबैभन्दा ठूलो हो। अमेरिकास्थित विश्व उइघुर कंग्रेसले आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा चलिरहेका बेला सरकारले हतियारसहित दमन गरेको आरोप लगाएको छ। उसले मर्नेहरूको संख्या ६ सय भन्दा बढी रहेको र घाइतेको संख्या असंख्य रहेको दाबी गरेको छ। उरुम्कीमा साम्प्रदायीक दंगा भड्कींदा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा रुसी राष्ट्रपति दिमित्री मेतभेतेभसंग आणविक कटौतीसम्बन्धी वार्तामा थिए । उनले उरुम्की घटनाका सम्बन्धमा तत्कालै प्रतिक्रिया दिए र चीनलाई मानवअधिकारको रक्षाका लागि आग्रह गरे।
घटनाको कारण पत्ता नलागी चीनलाई मानवअधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिनुलाई कुटनीतिक हिसाबले सो नरसंहारमा सरकारी सुरक्षाफौजको संलग्नतालाई पुष्टी गर्ने चीनविरोधी राष्ट्रहरूको षड्यन्त्र भएको स्पष्ट छ। अमेरिका चीनलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा चित्रित गर्न चाहन्छ र सिञ्झियान, तिब्बतलगायतका प्रान्तहरूलाई पृथक गराउन चाहन्छ भन्ने थुप्रै प्रमाणहरू छन्।
गत महिना साओगानको फ्याक्ट्रीमा दुई जना उइघुर मुसलमान मजदुरको मृत्यु हुने गरी भएको दंगामा प्रहरीले हान समुदायका मजदुरलाई कारबाही नगरेको भन्दै उइघुरले आक्रोस व्यक्त गर्न र हानसंग प्रतिशोध सांध्न यो आक्रमण गरेका थिए भन्ने विश्लेषकहरू बताउंछन्। सो फ्याक्ट्रीमा कार्यरत उइघुर मुसलमान मजदुरहरूले दुई जना हान समुदायका केटीहरूलाई बलात्कार गरेको रिसमा हान समुदायले उनीहरूमाथि आक्रमण गर्दा ती दुई उइघुरको मृत्यु भएको थियो। तर गत ओलम्पिक खेलका समयमा उइघुर समुदायबाट भएका हिंसात्मक घटनाको पछाडि के कारण थियो र यसअघि उइघुरले गरेका थुप्रै हिंसात्मक घटनाका पछाडि को जिम्मेवार थियो भन्ने कुराको विश्लेषण छुट्टै किसिमले गर्न थालिएको छ।
त्यस फ्याक्ट्रीमा आफ्नो समुदायका मानिसको मृत्युको बदला लिन हातहतियारसहित उरुम्कीका सडकमा निस्किएका उइघुर मुसलमानहरूलाई प्रहरीले तितरबितर हुन आदेश दिए तापनि उनीहरू हान समुदायका मानिसहरू खोज्दै हिंडेका थिए। सुनियोजित ढंगबाट सुरु भएको यो दंगा केवल दुई जना उइघुर मुसलमानको हत्यासंग सम्बन्धित नभएर सो हत्याको निहुं केवल माध्यम मात्र भएको धेरैको विश्वास छ।
सरकारले यो दंगाको जिम्मेवार अमेरिकामा रहेको विश्व उइघुर कंग्रेसलाई ठहराएको छ। उसले यस साम्प्रदायिक दंगामा विदेशी शक्तिको हात रहेको र त्यस शक्तिले देशभित्रको अवैधानिक शक्तिलाई प्रयोग गरेको बताएको छ।
जुलाई ५ को राति भएको यस दंगामा कति जनाको ज्यान गयो यकिन तथ्यांक बाहिर आउन सकेको छैन। टेलिभिजनहरूले बस स्टेसन नजिक एक महिलालाई थुप्रै मानिसहरूले आक्रमण गरिरहेको र उनी भुइंमा छटपटाइरहेको दृष्य देखाएको थियो। पिटाइका कारण गाला सुन्निएका, टाउकोबाट रगत बगिरहेको, सडकमा छटपटाइरहेका मानिसहरूका दृष्य टेलिभिजनहरूले प्रशारण गरेका थिए। सोमबार घांटी रेटिएको अवस्थामा मानिस गल्लीमा भेटिएका थिए। एक जना केटीको हात र गाला काटिएका थिए। त्यस्ता पीडित व्यक्तिहरूमध्ये धेरैजसो हान समुदायका थिए।
छुरी लिएका उइघुर मुसलमानहरूले थुप्रै मानिसहरूलाई बसभित्र थुनेर गर्दन छिनाली दिए। ती दंगाकारीहरूले बसमा रहेका मानिसहरू हान हुन् वा उइघुर हुन् भन्ने कुरा छुट्याउन चाहेनन्। यसरी हेर्दा उनीहरूको उद्देश्य जातीय प्रतिशोध भन्दा पनि दंगा भड्काउने थियो।
एकजना हान समुदायका व्यापारीका अनुसार उइघुर मुसलमानहरूले उनको पसलको सिसा फुटालेर भित्र पसे र चाहिएजति सामान लिएर पसलमा आगो लगाइदिए। उनी भन्छन् ‘हामी तीन घण्टासम्म सिरकको कभर लिएर लुक्यौं। जब सिरकमा आगो सल्कन थाल्यो, मर्नुको विकल्प नदेखेपछि भागेर ज्यान बचायौं।’
त्यसो त उइघुर मुसलमानहरू रक्तपात हुनुलाई आश्चर्यका रूपमा मान्न तयार छैनन्। एक उइघुर भन्छन् ‘चिनियांहरू सधैं हामीलाई तल्लोस्तरको मान्छे सम्झन्छन्। यतिसम्मकी उनीहरू हाम्रो आंखामा सिधा हेर्न समेत चाहन्नन्। यो शताब्दियौंदेखि चलिरहेको छ। यसैले रगत बग्नु अनौठो कुरा होइन।’
चीनमा बढ्दै गएको औद्योगीकरणले एक प्रान्तका जनता अर्को प्रान्तमा बसाइ सर्नु सामान्य जस्तै भएको छ। तर बितेका केही दशकयता ठूलो संख्यामा उइघुरहरू सिञ्झियानमा भित्रिएपछि उनीहरूको बाहुल्यता बढ्दै गएको छ। यसरी लामो समयदेखि आफ्नो सत्ता कायम हुंदै आएको सिञ्झियानमा उइघुरको आवादी बढेपछि हान समुदाय समेत आक्रोशित बनेको छ।
हानहरू उइघुरलाई अल्छी जाति मान्छन् । आधुनिकीकरण र त्यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि बेइजिङले लिएको नीतिप्रति उइघुर उदासिन रहेको हानको आरोप छ। विश्वमा उद्वियमान शक्तिका रूपमा अगाडि बढेको चीनमा यस्ता अल्छीहरूलाई विद्रोहमा उतार्न अमेरिकालाई सजिलो भएको सर्वत्र विश्लेषण गरिएको छ। तर त्यसो हुंदाहुंदै पनि अल्पसंख्यक जातिको अधिकारको नाममा यस्ता विद्रोह र साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने षड्यन्त्रलाई निस्तेज पार्न नसक्नुलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा समेत हेर्न थालिएको छ।
सरकारी सञ्चारमाध्यम तथा अधिकारीहरूले उरुम्की दंगामा मर्नेहरूको यकिन संख्या बताएका छैनन् । मारिएका १५६ जना सरकारी सुरक्षा फौजबाट वा दंगाकारीबाट मारिएका हुन् त्यसको यकिन हुन सकेको छैन। चिनियां कम्युनिष्ट पार्टीका उरुम्की प्रमुखले बुधबार हत्याको जिम्मेवार व्यक्तिलाई सरकारले मृत्युदण्डको सजाय दिने बताएका छन्।
जुलाई ६ को बिहान हेलमेट लगाएका २ हजार भन्दा बढी दंगाप्रहरी सडकमा देखिएका थिए। अर्धस्वचालित बन्दुक लिएका प्रहरीहरू मुख्य चोकहरूमा पहरा दिइरहेका थिए। दंगा भड्किएपछि सरकारले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको थियो। दंगामा २६० वटा सवारी साधन र २ सयभन्दा बढी पसलहरू तोडफोड गरिएका छन्। धेरैजसो हिंसा सहरको केन्द्रमा रहेको रेनमिन पिपुल्स स्क्वायर, जिइफाङ र सिन्हृवा दक्षिणी सडक र बजारमा भएका छन्। सोमबार सरकारले सेना नै तैनाथ गर्‍यो, यसैले तीन सय जति प्रदर्शनमा निस्किए पनि हिंसा भने हुन पाएन।
सिञ्झियान सरकारले पृथकतावादी उइघुर समुदायलाई हिंसाको जिम्मेवार ठहराएको छ जसले आदिवासी हान समुदायमाथि आक्रमणको थालनी गरेको थियो। उइघुर अमेरिकन एशोसियसनले प्रदर्शनमाथि सुरक्षाफौजको दमनलाई भर्त्सना गरेको छ। यसलाई निहुं बनाएर विश्व समुदायसमक्ष त्यस संगठनले चीनलाई आलोचना गर्न आग्रह समेत गरेको छ।
उरुम्की साम्प्रदायिक दंगाका विषयमा इटलीको लाक्लीलामा आयोजित समूह- ८ को बैठकमा समेत कुरा उठाइयो। मानवअधिकारको संरक्षण गर्न र जनताको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न चिनियां राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई पश्चिमा नेताहरूले दबाब समेत दिए। राष्ट्रपति हु जिन्ताओ जी- ८ बैठकलाई छोट्याएर तुरुन्तै स्वदेश फर्कनु पर्‍यो।
चीनमा क्रान्ति सम्पन्न हुनु अघिदेखि अहिलेसम्म साम्प्रदायीक तनाव जारी छ। चीनका ८० लाख उइघुर मुसलमानहरूले चीनबाट र त्यसको बहुसंख्यक हान जनसंख्याबाट आफूलाई पृथक बनाउन चाहिरहेका छन्। राज्य नियन्त्रित सिन्हृवा समाचार समितिले यो आक्रमण सुनियोजित रूपमा विदेशी शक्तिको निर्देशनमा देशभित्रका अवैधानिक शक्तिबाट भएको बताएको छ।
गत वर्ष आयोजित ओलम्पिक खेलका क्रममा प्रहरीमाथि भएका शृंखलाबद्ध आक्रमणलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक सामना गरेको थियो। सरकारले मस्जिद तथा केही सहरका बजारहरू बन्द गराउनुका साथै उइघुर समुदायमाथि निगरानी राखेको थियो ।
अमेरिकाको संरक्षणमा रहेको विश्व उइघुर कंग्रेसका अनुसार प्रदर्शनमा उत्रिएका जनताको भिडमाथि चिनियां प्रहरीले मेसिनगन प्रयोग गरी अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्नाले ठूलो संख्यामा जनताको मृत्यु भएको दाबी गरेको छ । एक उइघुर व्यक्तिका अनुसार आइतबार अपरान्ह ५ बजे मजदुर, विद्यार्थी तथा अन्य नागरिकसहित हजारौं उइघुर समुदायको शान्तिपूर्ण जुलुसले भेदभाव अन्त गर्न, सस्तो उइघुर श्रमिक मेनल्याण्डमा नभित्र्याउन र दुईजना मजदुरको हत्याको स्वतन्त्र छानविन गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।
तर प्रहरीले यसरी प्रदर्शन गर्नेहरूसंग हतियार भेटिएको र सडकहरूमा भोली बिहान मानिसहरूका टाउका सेरिएका शवहरू भेटिनुलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भन्न नमिल्ने बताएको छ। सरकारले सोमबार सिञ्झियानको दंगा साम्य पार्न हेलिकोप्टरबाट पर्चा खसालेको थियो। एक सातापछि उरुम्कीको दंगाको अन्त्य भएको छ र त्यहांको जनजीवन सामान्य भएको छ।
तर के यो दंगा सदाका लागि सरकारी नियन्त्रणमा आयो त ? उइघुर मुसलमान अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको ग्यारेन्टी नभएसम्म र विदेशी हस्तक्षेपलाई अन्त नगरेसम्म उइघुर मुसलमानको विद्रोहको अन्त्य नहुने चिनियां नेतृत्वले बुझ्नु पर्छ।
Posted by CHINTAN on जुलाई 17, 2009 in NEWS, SPECIAL